Imincintiswano yezincwadi kazwelonke ngoMeyi | Izincwadi Zamanje
Imincintiswano yezincwadi kazwelonke ngoMeyi
UCarmen Guillen | | Imincintiswano Nemiklomelo, Abalobi, Literatura, eziningana
Njengoba sazi ukuthi kukhona nababhali abaningi phakathi kwabafundi bethu, sikulethela izindatshana ezimbili eziqinisekile ukuthi zizokulungela: "Imincintiswano kazwelonke yezincwadi ngoMeyi", okufanayo, futhi "Imincintiswano yamazwe omhlaba ngemibhalo ngoMeyi", okuzoba eduze kwalokhu.
Ungahlali ngaphandle kocingo!
1 II ZAMORA BOOK FAIR MICRORELATS CONTEST 2015
2 UMNCINTISWANO WOKUBHALWA KWEZINCWADI OWABALAWULA NGO-2015
3 UMBHALO WOMBHALO WONCWADI V CENTENARY SANTA TERESA DE JESÚS
II ZAMORA BOOK FAIR MICRORELATS CONTEST 2015
Umklomelo: € 200 ezitolo ezidayisa izincwadi eZamora, iqoqo lezincwadi nokushicilela
Vula ku-: Kusuka eminyakeni eyi-8
Ukuhlela ibhizinisi: UMnyango Wezamasiko woMkhandlu Wedolobha iZamora, ngokubambisana neZamora Library Association (AZAL) kanye ne-State Public Library eZamora
Izwe lebhizinisi lokushaya: España
Usuku lokuvala: 07/05/2015 (ekuseni)
Imisebenzi izoba netimu yamahhala, ebhalwe ngeSpanishi futhi inkulumo ethi "incwadi yokuphila kwami" kufanele ivele emzimbeni wendaba.
Imisebenzi ebhalwe ngesandla ngeke yamukelwe.
Umncintiswano unezigaba ezi-3:
Izingane ezineminyaka engu-8 kuya kwengu-12 ubudala.
Abantu abasha abasukela eminyakeni engu-13 kuya kwengu-17 ubudala.
Abantu abadala, kusukela eminyakeni engu-18.
La ubude bendaba ngayinye encane kuzoba nge Amagama angama-200 aphezulu, isihloko eceleni.
Imisebenzi eyethulwe ngaphandle kokubheka le mibandela izokwenqatshwa yijaji.
Izindaba ezinamaphutha esipelingi noma lezo ezehlisa isithunzi sabantu besithathu noma eziqukethe ukuphawula okucasulayo noma okungahloniphi zizolahlwa ngokuzenzakalela. Izinga lemibhalo lizohlonishwa.
Imisebenzi kumele ibe ngeyangempela futhi ingashicilelwa futhi akumele inikezwe komunye umncintiswano. Isibopho sokukhwabanisa okungenzeka sizohambelana kuphela nombhali wendaba ngayinye.
Ababhali bezindaba ezincane eziklonyelisiwe nezikhethiwe zinika abahleli amalungelo okuzishicilela
Ukuze kuqinisekiswe ukugcinwa kwemfihlo nokungaziwa kwemisebenzi, ukwethulwa kwemibhalo yangempela kuzokwenzeka eZamorana Association of Libraries (AZAL), etholakala ePlaza de Alemania nº 1, kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-14: 00 ntambama, kusukela ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu , Ngokulandelayo:
Umsebenzi uzofakwa emvilophini evaliwe, esizoyibiza ngemvilophu enkulu engaphandle okumele ibonakale II Contest of Micro-stories Book Fair 2015, isigaba esethulwa kuso (Izingane, Intsha noma Abadala) kanye isiqubulo noma isibizo.
Kwenye imvilophu evaliwe, imininingwane efanayo nemvilophu enkulu kufanele ivele ngaphandle. Futhi ngaphakathi, kuzofakwa imininingwane yomuntu siqu yombhali (igama, iminyaka, ikheli kanye nenombolo yocingo), kanye nokugunyazwa kukababa, umama noma umqaphi wezingane.
Umuntu oqoqa izimvilophu ezimbili ekomkhulu le-AZAL kufanele aqinisekise ubudala bombhali wendaba ngayinye, ukuze afake izimvilophu ezimbili esigabeni seminyaka esifanele.
Abahleli bazoqoka ijaji, elenziwe ngabadayisi bezincwadi nabasebenza emitatsheni yezincwadi, abazokhetha izindaba ezingama-30 ezihamba phambili, eziyi-10 esigabeni ngasinye futhi abazokhetha umklomelo wokuqala esigabeni ngasinye.
El ijaji elibusayo, okuzobe kungathandeki, kuzomenyezelwa lapho kuvulwa iZamora Book Fair, ePlaza Viriato ngoLwesihlanu, Meyi 29, 2015.
Izindatshana ezincane eziyi-10 ezikhethwe esigabeni ngasinye kwezi-3, zingama-30 sezizonke, zizoshicilelwa encwadini ezokwethulwa ekuvulweni kwe-Fair, inikeze ikhophi kulowo nalowo kulabo abakhethiwe, abazofunda indaba yabo ngaphambi umphakathi ohambele ukuvulwa.
Imiklomelo emi-3, eyodwa esigabeni ngasinye, izothola u- € 200 ozochithwa ezitolo zezincwadi zeZamora ezibambe iqhaza kwi-Fair kanye neqoqo lezincwadi. Labo abakhethiwe bazothola isipho. I-Zamorana Association of Libraries ithatha yonke imiklomelo.
UMNCINTISWANO WOKUBHALWA KWEZINCWADI OWABALAWULA NGO-2015
Ubulili: Indaba noveli
Umklomelo: Ama-euro angu-9.000 nohlelo
Vula ku: mdala kuneminyaka engu-15
Ukuhlela ibhizinisi: I-Alcobendas City Council (iMadrid)
Usuku lokuvala: 08/05/2015
Umkhandlu Wedolobha i-Alcobendas umemezela umncintiswano i- "EL FUNGIBLE Literary Contest" ngenhloso yokukhuthaza ubuciko bemibhalo yabalobi abakhuluma iSpanish emhlabeni jikelele. Izokwakhiwa ngezigaba ezimbili: I-XXIV Young Story Contest kanye ne-VII Short Novel Contest.
Bangaya esifundweni se- Umncintiswano Wezindaba Ezintsha we-XXIV bonke abantu abasha abaphakathi kweminyaka engu-15 kuya kwengama-35 abanemisebenzi yoqobo nengashicilelwe engakaze inikezwe, noma ishicilelwe iphelele noma ingxenye yayo, phambilini. Umbhali ubhekene nempahla yengqondo yomsebenzi owethulwe ngomklomelo kanye nokuqanjwa kwawo, kanye nokungabi yikhophi noma ukuguqulwa komsebenzi womunye umuntu. Ukwehluleka ukuhambisana nalesi sisekelo kuzoba ukuphela kwesibopho somenzi wobubi.
Imisebenzi izoba indaba ephathwayo free, ibhalwe ngeSpanishi futhi ubude bayo bungu-3 nobude obungamakhasi ayi-10 we-DIN A-4, ahlukaniswe kabili, nefonti yama-Arial enamaphuzu ayi-11 futhi ibhalwe ohlangothini olulodwa.
Ukubamba iqhaza Kwenoveli emfushane:
- Bonke abantu abaneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala ngemisebenzi yoqobo futhi engashicilelwe enganikwanga, noma engashicilelwanga ngokugcwele noma ingxenye, bangaya emncintiswaneni we-VI Short Novel Contest. Umbhali ubhekene nempahla yengqondo yomsebenzi owethulwe ngomklomelo kanye nokuqanjwa kwawo, kanye nokungabi yikhophi noma ukuguqulwa komsebenzi womunye umuntu. Ukwehluleka ukuthobela lesi sisekelo kuzoba umthwalo walowo owonile.
- Imisebenzi izoba nge indaba ephathwayo free, ibhalwe ngeSpanishi futhi ngobude obungu-45 nobude obungamakhasi angama-90, usayizi we-DIN A4, uhlukaniswe kabili, nefonti yama-Arial enamaphuzu ayi-11 futhi ibhalwe ohlangothini olulodwa.
Imisebenzi, okungenzeka ukuthi ayinasiginesha noma uphawu oludalula imvelaphi yayo, kufanele ithunyelwe (esimweni sokuthumela ngeposi elijwayelekile) echaza ngaphandle kwemvilophu indlela encintisana ngayo: iNdaba noma iNoveli. Ukuthunyelwa kufanele kuhambisane nenye imvilophu evaliwe, ngaphandle kwayo okuvela kuphela isihloko sendaba nangaphakathi, imininingwane yalowo obambe iqhaza: igama, isibongo, ikheli, inombolo yocingo, i-ID, usuku lokuzalwa nekheli le-imeyili.
Amaphepha nawo angathunyelwa nge-imeyili. Kulokhu, kufanele ithunyelwe ngekhophi eyodwa yomsebenzi, ngefomethi ye-pdf, kumyalezo oya ku isiqondiso elfungible@aytoalcobendas.org, lapho "Isihloko" sivela kuphela isimo kanye nesihloko somsebenzi. Umbambiqhaza kufanele futhi athumele, futhi ngomsebenzi ngamunye, umbhalo wokuhlonza umuntu uqobo, unamathisele ifayili, ehlala iku-pdf, ezoba negama layo njengegama elithi Plica kanye nesihloko somsebenzi, futhi lokho kuzofaka imininingwane yomuntu siqu kanye nemininingwane yokuxhumana yombhali: igama, isibongo, usuku lokuzalwa, ucingo kanye nekheli le-imeyili.
Umbhali wendaba noma inoveli uzothathwa njengomuntu ovela enjalo, futhi kube yilowo muntu kuphela. Imibhalo ebhalwe ngabantu abangaphezu koyedwa ngeke yamukelwe, noma leyo lapho imvilophu evaliwe ingananyathiswanga khona (noma, lapho kufanele khona, umqulu we-pdf onayo yonke imininingwane yokuhlonza).
Endabeni yabancane, kufanele kufakwe isitatimende esisayinwe ngabazali noma ababheki babo, sikhombise imininingwane yabo futhi sigunyaze iqhaza lomntwana emncintiswaneni.
Imiklomelo elandelayo isunguliwe, engahle ingancintisani kumuntu ofanayo:
Umklomelo Wezindatshana ezihamba phambili: I-2.500 euro.
Umklomelo weNoveli ohamba phambili: I-9.000 euro.
Ukugijimela Indaba Yokugcina: I-1.000 euro.
Umklomelo Wesibili Wenoveli Yokugcina: I-3.000 euro.
Imiklomelo ingahle ibe yize.
Imisebenzi ewinile, kanye nomsebenzi wokugcina ngokwezigaba, uzoshicilelwa encwadini ekhishwe yi-Alcobendas City Council. Ababhali bokufanayo babela uMkhandlu Wedolobha, kuphela futhi ngamandla wokunikeza abantu besithathu, umhlaba wonke futhi ngesikhathi esinqunyiwe somthetho, amalungelo okuzala kabusha, okusabalalisa nokuhumusha kuzo zonke izilimi zezindaba , ngefomethi yencwadi, kunoma yiziphi izindlela zokushicilela. UMkhandlu Wedolobha ungenza izinhlelo eziningi njengoba unquma, ubuncane bezinkulungwane kanye namakhophi aphezulu ayi-1.000 lilinye. Endabeni yabaphumelele kanye nabokugcina, inani lemiklomelo lizobhekwa njengesinxephezelo sokudluliswa kwamalungelo enziwe futhi lizoba ngaphansi kokubanjelwa intela okusungulwe ngumthetho.
Ababhali bemibhalo ezoshicilelwa banesibopho sokusayina inkontileka efanelekile yokushicilela, ezofaka phakathi ukuxhashazwa okubanzi kakhulu kwabo, ngokwemigomo yalezi zisekelo. Uma inkontileka ingasayiniwe nganoma yisiphi isimo, okuqukethwe kwalezi zisekelo kuzobhekwa njengesivumelwano sokudluliswa kwamalungelo phakathi koMkhandlu Wedolobha nabalobi.
Kungathunyelwa ubuningi bemisebenzi emibili ngombhali ngamunye. Abaphumelele ezinhlelweni ezedlule zomncintiswano ngeke baye kulo mncintiswano.
Ijaji lizokwakhiwa ngababhali ababili abahlonishwayo. Ukwakheka kwayo ngeke kwaziwe emphakathini kuze kube yilolo suku lapho umklomelo unikezwa.
El ijaji elibusayo Kuzoba okokugcina futhi kuzokwenzelwa umphakathi ngoSepthemba 2015, kugcinelwe inhlangano ehlelayo ilungelo lokushintsha lolo suku ngendlela elula ngalo. Abahlanganyeli bayavuma ukuthi igama nesithombe sabo kuzosetshenziswa ekwazisweni kwalokhu kuphromotha.
Ukubamba iqhaza kulo mncintiswano kusho ukwamukelwa ngokugcwele kwezinqumo zejaji, kanye nezisekelo zalo, abagqugquzeli abanelungelo lokuzihumusha.
UMBHALO WOMBHALO WONCWADI V CENTENARY SANTA TERESA DE JESÚS
Ubulili: Izinkondlo nendaba
Umklomelo: Ama-euro angama-500 nediploma
Vula ku: ayikho imikhawulo
Ukuhlela ibhizinisi: Amanyuvesi amaKatolika ase-Avila, eSan Pablo CEU, eCardenal Herrera CEU, e-Abat Oliba CEU, e-Catholic University yaseValencia, eFrancisco de Vitoria naseSan Jorge de Zaragoza
Usuku lokuvala: 15/05/2015
Amanyuvesi amaKatolika ase-Avila, San Pablo CEU, Cardenal Herrera CEU, Abat Oliba CEU, Universidad Católica de Valencia, Francisco de Vitoria naseSan Jorge de Zaragoza bahlela umncintiswano Wezincwadi (izinkondlo nendaba) ngesikhathi somhlangano we-interuniversity "Santa Teresa de Jesus, Teacher of Life ”, ebungazwa emcimbini we-V Centenary yokuzalwa kuka-Saint Teresa kaJesu.
Amaphepha kumele akhuthazwe ngenye yamabhulokhi amane engqungquthela.
1. Ungabamba iqhaza noma yimuphi umbhali wombhalo wokuqala futhi ongashicilelwe futhi ongathunyelwanga kunoma yimuphi omunye umklomelo ngezinsuku ezihambisana nale kholi. Akuyona imfuneko ebalulekile ukuthi bangabantu / amaqembu avela endaweni eyunivesithi.
2. Imisebenzi kumele igqugquzelwe ngenye yezingqimba ezine zengqungquthela:
USaint Teresa nokushunyayelwa kwevangeli okusha.
Ubunye Bokuphila: Umhlaba Wangaphakathi.
Impilo Unit: Ngaphandle Kwezwe.
ISanta Teresa, Ukuqinisekiswa Nokubukwa Kwesikhathi Esizayo.
Imisebenzi kufanele ibe kubhalwe ngeSpanishi, noma zethulwe ngolimi lwazo lwangempela futhi zahunyushelwa olimini lweSpanishi.
4. Imisebenzi izothunyelwa emncintiswaneni ngefomethi yedijithali (pdf, okungcono) ekhelini le- imeyili maestradevida@gmail.com. Ubude bemisebenzi buzoba ngale ndlela elandelayo: esigabeni sezindaba ezimfushane, ngeke seqe amakhasi ayi-10 anezikhala zemigqa engu-1,5 naku-Times New Roman font ngosayizi wamaphuzu ayi-11; Kumodi yezinkondlo, inkondlo noma iqoqo lezinkondlo ngeke leqe amavesi angama-200, elethwe ngezikhala zomugqa eziyi-1,5 naku-Times New Roman ngobukhulu bamaphuzu ayi-11.
I-5 I umnqamulajuqu wokuthola yemisebenzi izoba ngoMeyi 15, 2015.
6. Ifomu lokubhalisa eligcwaliswe ngokufanele futhi elisayiniwe kufanele lithunyelwe kanye nomsebenzi. Ifomu lokubhalisa lingaskenwa bese lithunyelwa ekhelini elifanayo le-imeyili, kanye nesitatimende esifungelwe lapho kuqinisekiswa khona ukuthi ungumnikazi wobunikazi bomsebenzi ohanjisiwe.
7. Ukubamba iqhaza kulo mqhudelwano kuzosho ukudluliswa ngaphakathi kwenhlangano yeCongress yamalungelo okusakaza emisebenzi efakiwe. Akunasimo lapho imisebenzi eyamukelwe izobuyiselwa, ezofakwa kungobo yomlando yenhlangano.
8. IKomidi Lezokukhetha kanye neJaji elinekhono yilo elizophatha ekukhetheni imisebenzi ezowina.
9. Kokubili iKomidi Lokukhetha kanye neJaji kuzokwakhiwa ngabantu abathintekayo futhi izinqumo zabo zizoba ngujuqu.
10. Imiklomelo izomenyezelwa ngesikhathi kugujwa i-Interuniversity Congress "Santa Teresa de Jesús: Teacher of Life". Ijaji lingakhipha le miklomelo elandelayo:
Umklomelo Wokuqala wendaba enhle kakhulu: Inani lomklomelo: ama-euro angama-500 nediploma.
Umklomelo Wokuqala ngenkondlo enhle kakhulu noma iqoqo lezinkondlo: Inani lomklomelo: ama-euro angama-500 nediploma.
Umklomelo Wesibili wendaba enhle kakhulu: Inani lomklomelo: ama-euro angama-250 nediploma.
Umklomelo Wesibili wenkondlo ehamba phambili: Inani lomklomelo: ama-euro angama-250 nediploma.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Imincintiswano yezincwadi kazwelonke ngoMeyi
Imincintiswano yezincwadi zomhlaba wonke ngoMeyi
UJulia Ward Howe, owesifazane owethule uSuku Lomama lwesimanje